Amụma Nzuzo - AfricaArXiv
Adreesị weebụsaịtị anyị bụ: https://info.africarxiv.org.
Enwere ike inye eriri ajị ajọrọ ahapụtara na adreesị ozi-e gị (nke a na-akpọkwa hash) na ọrụ Gravatar iji hụ ma ị na-eji ya. Iwu nzuzo nzuzo nke Gravatar dị ebe a: https://automattic.com/privacy/. Mgbe nkwenye ị kwenyechara, ikwu profaịlụ profaịlụ profaịlụ profaịlụ gị na-egosipụta ihe ị kwuru.
Ọ bụrụ na ịhapụ nkọwa na saịtị anyị, ịnwere ike ịbanye ịchekwa aha gị, adreesị ozi-e na websaịtị na kuki. Ihe ndị a bụ maka ịdị mma gị ka ị ghara imeju nkọwa gị ọzọ mgbe ị na-ahapụ nkọwa ọzọ. Kuki ndị a ga-adị otu afọ.